March 2018 - Page3of 111 - BuzzFeed Myanmar
ပေါကား လို့ပြောတာအားလို့ယားလို့ ပြောနေတာလို့ဆိုတဲ့ဟာသ သရုပ်ဆောင်မျိုးမျိုးခိုင်
ဟာသ သရုပ်ဆောင် မျိုးမျိုးခိုင်ကတော့ ပေါကားလို့ ပြောတဲ့ ဟာသရုံတွေမှာပဲ လူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲလေ။ အဲ့လို ပေါကားတွေမှာပဲ လူများနေတဲ့ အတွက် သူတို့ ပြောချင်ရာပြော ဘာပြောပြော အေးဆေးပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကားတွေတောင် ငပေါတွေ ရှိရက်နဲ့ ဘာလို့ မြန်မာကားကိုပဲ ပေါတယ်လို့ ပြောနေကြတာလဲ လို့ သူက မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
မှောင်ခို လက်မှတ်တွေ ဝယ်ပြီး အကယ်ဒမီ ပွဲတက်တဲ့သူတွေ အကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ မိုခမ်း
မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ အမေခန်း၊ အမခန်း၊ ဖိုက်တင်ခန်း၊ အချစ်ခန်း ဇာတ်ရုံစုံရတဲ့ မိုခမ်းကလည်း ပရိသတ်တွေ အားပေးမှု နဲ့ အနုပညာလောကမှာ ရပ်တည်နေတာ အနှစ် ၃၀ ကျော် ရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အတော်များ များ ရဲ့ ဇာတ်ပို့နေရာ မှာ တွေ့ရတဲ့ မိုခမ်းက သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ အတွက် နေရာ တစ်နေရာ မှာ ရပ်တည်နေနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အန်တီ ဆွေဇင်ထိုက် ဘာ့ကြောင့် စကားပြောကောင်းပြီး အရမ်းတော်နေရသလဲသိချင်သူများအတွက် အန်တီရဲ့အကြောင်း
ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်သည် မြန်မာရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်ကို ရန်ကုန်မှာ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ နေ့ရက်က မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ စမ်းချောင်း အထက (၂) ကနေ ၁၀ တန်း အောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကနေ B.Com. (I.T.) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ Burma Council of Account ကနေ စာရင်းကို ဒီပလိုမာ ရခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ဦးဆောင်ပြီး ဘဏ္ဍရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို စတင်ဖွဲ့စည်း လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ တာဝန်ကို စတင်ထမ်းဆောင်ဖို့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာပဲ အဲ့ဒီ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပါ။
အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး ပြဿနာမှလွဲ၍ စာစစ်တာဝန်မငြင်းပယ်ရန် ဆရာ၊ ဆရာမများကို အသိပေး
ရုတ်တရက် ဆေးရုံတက်ကုသရသည့် ကိစ္စမှလွဲ၍ တက္က သိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာစစ် ဆေးရမည့် တာဝန်ကို မငြင်းပယ် ရန် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးမှူးရုံး များက ဆရာ၊ ဆရာမများကို အသိပေးထားသည်။
တာမွေ ရှိ ရွှေဗဟိုအထူးကုဆေးရုံ၌ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်က ဆေးထိုးပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆေးရုံကြမ်းခင်းတွင် လဲကျသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုဆိုကာ တာမွေမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ် ရွှေဗဟိုအထူးကုဆေးရုံ၌ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်က ဆေးထိုးပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆေးရုံကြမ်းခင်းတွင် လဲကျသေဆုံးခဲ့မှု မတ် ၂၇ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် တာမွေမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှု ဖွင့်လှစ်တိုင်ကြားထားပြီး တာမွေမြို့မရဲစခန်းက အမှုလက်ခံထားကြောင်း မတ် ၃၀ ရက်တွင် စုံစမ်းသိရသည်။
၂၀၁၈ ဧပြီလ မှာ တိုးပေးနိုင်ချေရှိသော လစာနှုန်းထား
၂၀၁၈ ဧပြီလမှာ တိုးပေးနိုင်ချေရှိသော လစာနှုန်းထားများသိရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိတိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကြောင့် သေဆုံး သွားခဲ့တဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ပာာ မိမိရဲ့ မိန်းမနှင့်ကလေးဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်သိရှိခဲ့ရတဲ့ ကားဆရာ
သူတစ်ပါးကိုတာဝန်မယူချင်တဲ့စိတ် ခုတော့ကိုယ်ခံရပြီတရုတ်နိုင်ငံရှိ Zhang လို့အမည်ရတဲ့ကားမောင်းသမားတစ်ဦးပာာလျှပ်စစ်စကူတာစီးလာတဲ့ကလေးလေးနဲ့မိခင်တစ်ဦးကိုတိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ဆင်းကယ်ပြီးဆေးရုံပို့ရင်အသက်မှီနိုင်ပေမယ့် ၎င်းရဲ့တာဝန်မသိမှု ခေါင်းရှောင်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးထိုသားအမိမှာသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။